Vaovao - Ny vokatra azo avy amin'ny Coil Bobinas Zincalum Galvalume
Endri-pamokarana Bobil Zincalum Galvalume Coil
Ny coils vy galvalume dia antsoina koa hoe coz aluzinc / coil zincalum / coil aluminium vita amin'ny savily. Izy io dia misy alimina 55%, zinc 43,4% ary silika 1,6% sitrana amin'ny 600 ℃。 Mamorona kristaly quaternary matevina, ka mamorona sakana mahery sy mahomby hisorohana ny fidiran'ny singa harafesina.
Ny vokatra dia manasongadina
▶ Fanoherana ny fanimbana tanteraka. Ny androm-piainan'ny galvalume dia 3-6time raha toa ka ny velarantany galvanized. Nandritra ny fanandramana famafazana sira teo aloha niaraka tamin'ny galvalume sy galvanized izay hatevin'ny rindrina mitovy.
▶ Fahombiazana mahomby amin'ny fanodinana. Feno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fikarakarana horonan-taratasy, fametahana, hiondrika, sns.
▶ Taratra taratra mazava. Ny fahafahan'ny taratry ny hazavana sy ny hafanana dia avo roa heny noho ny galvanizing, ary ny taratra dia lehibe kokoa noho ny 0.7. Matetika izy io dia ampiasaina ho fitaovana insulate.
▶ Fanoherana tanteraka ny hafanana. Ny vokatra Galvalume dia azo ampiasaina amin'ny 315 degre Celsius mandritra ny fotoana lava tsy misy fiovan'ny volony. Raha ny vokatra galvanized dia miova amin'ny 250 degre Celsius.
▶ Firaikitra tsara eo amin'ny loko. Mora hosodoko ary azo hosodoko tsy misy fitsaboana mialoha sy toetrandro.